China Kubika Oiri sosi girazi Mabhodhoro ne anodurura spout uye isina Stainless simbi shell Factory uye Vagadziri | Chuancheng
Kubika Oiri sosi girazi Mabhotoro ne anodurura spout uye stainless simbi shell
Yakagadzirwa kubva kumusoro kwemhando yegirazi, inoratidzika nekristaro yakajeka yakavharwa, airtight bhodhoro emadziro, uye kudurura maspout ane lever-kuburitswa snap lids.
Yakagadzirwa kubva pamhando yepamusoro simbi isina girazi pasi, isingaiti simbi yekuvhara girazi muviri inodzivirira kupwanya.
Yakatsetseka neyekudya yeresitoreti anotarisa uye anonzwa, iyo oiri nevhiniga dispenser inobvumira kudonhedzwa kuri nyore kudururwa uye kushoma pane kupera
Iyi yepamusoro-yegirazi mabhodhoro emhando yepamusoro ayo anokwanisa kushandiswa nezvinwiwa zvinwiwa, zvisanganiswa, mafuta, vhiniga, waini yekubika, sosi nezvimwe zvakawanda.
kushandiswa mafuta, vhiniga
kudhinda silika kudhinda, nezvimwe
kugona 200ml, 300ml
logo logo yemutengi inogamuchirika
nguva yekutumira mukati memazuva makumi matatu
mhando 1.free fo iripo sampula2.s muenzaniso nguva iri mazuva 7-10.kuti vatengi dhizaini sampuli, sampuli mubhadharo iUS USD100-200, muenzaniso mubhadharo unogona kudzorera kamwe kuodha huwandu hunosangana neMQQ
KUSHAYA OIL uye VINEGAR DispENSER SET - Mafuta eOrivhi uye vhiniga cruet mabhodhoro ane spout hapana anodonhedza misoro yekubika uye kupfeka.
OLIVE OIL CRUET SET - Nekutenda kune isina kuvharwa dhizaini, iyo yemafuta maorivhi inogadzira inoita kuti zvive nyore kwazvo kuwedzera mafuta kana vhiniga kune chero mundiro! Pamusoro pezvo, iyo isina-kudonha chimiro chebhodhoro remafuta inova nechokwadi chekuti kicheni yako inogara yakachena.
YEMAHARA EASY CLEAN KITCHEN Dispensers - BPA-isina bhutsu ichidurura Stopper matangi anogona kusukwa akachena nemvura inodziya; girazi rinogovera mabhodhoro ari mune yekugezesa akachengeteka
VERSATILE USHURE - Yakanakira mhando zhinji dzemafuta pamwe nevhiniga, sosi, kana kunyangwe mvura. Vaenzi vachada kushandisa aya anodadisa cruet.
OLIVE OIL NEVINEGAR DispENSER SET inouya muchipo bhokisi iyo inoitisa iyo huru yekuisa kunyemwerera pachiso chemumwe munhu; kungave kwekrisimasi, inoratidzira imba, muchato kana zuva rekuzvarwa, yakajeka bharisamu vhiniga disenser ndiyo sarudzo yakanaka
Yepfuura: gadzikwa ne airtight spout kicheni girazi bhodhoro remafuta olive
Inotevera: Bhodhoro reMafuta
Bvisa Oiri Yemafuta Bhodhoro
Olive Oiri Girazi Bhodhoro
Maorivhi eMafuta eGirazi
Chikamu Mafuta Bhodhoro
Transparent Round Girazi Threaded Uchi Jar ne ...
Mason Jar Wedding Favours Apothecary Jars Nyuchi ...
160ml girazi Munyu uye Pepper Grinder Set